Fantaro i Lourdes Sada, Mpandika Teny sy Mpanoratra An-Tsitrapo Ato Amin’ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2014 14:16 GMT
Lourdes ao amin'ny “trano fiasany.” Sary nahazoana alàlana.
Azo atao noho ny fisian'ny ekipan'ny mpanoratra sy ireo mpandika teny an-tsitrapo izay mamahenika ireo tantara miseho ato amin'ny aterineto, avy amin'ny bilaogy, ny gazety tsy miankina ary ny haino aman-jery sosialy amin'ny karazam-pitenenana 30 ny Global Voices.
Iray amin'ireny mpirotsaka an-tsitrapo manan-talenta ireny i Lourdes Sada. Roa taona lasa izay, tonga nanatevina laharana ny GV Espanola izy mba handika lahatsoratra tao, ary tafiditra lalindalina kokoa satria tonga mpanoratra. Nahasoratra sy nahadika lahatsoratra maherin'ny 400 izy hatramin'ny nidirany tao, ary izy no iray amin'ireo mpiasa an-tsitrapo mafana fo indrindra ao amin'ilay vondrona.
Niresaka taminy momba ny asany ho an'ny GV sy ireo tetikasa hafa ataony an-tsitrapo izahay.
Global Voices (GV): Manao ahoana i Lourdes, Tantarao anay ny mobamomba anao. Aiza ianao no mipetraka? Inona no ataonao?
Lourdes Sada (LS): Espaniola avy any Aragón aho. Tany Valencia sy tany Euskad aho no nipetraka tany Espaina, kanefa efa 22 taona aho izao no aty Bruxelles. Ato an-trano aho no miasa, izany no ananako fotoana betsaka hanaovana izay mahafinaritra ahy indrindra, ny manao asa an-tsitrapo ety anaty aterineto.
GV: Inona no mahafinaritra anao amin'ny asa an-tsitrapo atao aty anaty aterineto? Inona avy ireo zavatra efa niainanao?
LS: Nanomboka ity asa an-tsitrapo anaty aterineto ity aho rehefa nanomboka nandeha an-tsekoly ny zanako. Taorian'ny taona maro laniko tamin-dry zareo dia nahita fotoana malalaka ihany aho mandritra ny andro ary dia tiako natokana hanaovako izay zavatra ilain'ny hafa sady mampitombo fahalalàna ahy izany. Talohan'ny nipetrahako taty Bruxelles dia nianatra informatika aho, fa na tsy nahavita ny fianarako aza aho noho ny fifindran-toerana, tsy zava-baovao tamiko ny tontolon'ny informatika sy ny aterineto, noho izany amin'izao toerana misy ahy izao dia mety tsara ny asa an-tsitrapo atao ety anaty aterineto satria afaka mahazo tombony amin'ny fotoanako malalaka aho no afaka koa manohy mikarakara ny ankohonako ihany koa. Rehefa nitety ny habakaaho dia nahita tranonkala Frantsay mitady mpandika teny an-tsitrapo, ary teo no niandohan'ny zava-drehetra.
GV: Ahoana no nahatonga anao tafaraka amin'ny Global Voices ary inona no mampijanona anao ao ?
LS: Hitako tamin'ny fotoana nitadiavako tetikasa izay mila mpandika teny an-tsitrapo tamin'ny aterineto ny GV. Nampisalasala ahy ilay izy tamin'ny voalohany, noheveriko fa natao ho an'ny matihanina io tontolo io, nefa izaho tsy mpandika teny matihanina. Na izany aza anefa dia nanome vintana ahy ny tonian-dahatsoratry ny GV ary antenaiko fa tsy nahafaty antoka azy ireo aho. Tena faly aho mandika teny ho an'ny GV, manome fahafahana ahy handika karazana lohahevitra midadasika be izy. Matetika dia ireo vaovao izay tsy hita any amin'ireo haino aman-jery mahazatra miseho any aminà firenena maro no hita ao ary indraindray dia ny zava-miseho isan'andro izay tsy ataon'ny gazety eo amin'ny pejy voalohany ihany koa. Manampy ahy hanitatra ny fomba fijeriko momba izao tontolo izao izany rehetra izany.
GV: Manoratra ny lahatsoratrao ihany koa ianao. Zava-baovao aminao ve izany ?
LS: Eny, tsy mbola nanoratra mihitsy aho taloha. Fa noho ny tranga iray niseho tao amin'ny Parlemanta Espaniola, dia tezitra mafy tahaka ireo maro hafa aho ary vokatr'izany no nanolorako tena hanomboka hamoaka lahatsoratra ho an'ny GV. Ratsiratsy ihany ny zava-misy any Espaina, tsy ny lafiny ara-toekarena ihany fa tena mandreraka koa ny mahita ny tsy rariny, ny kolikoly, ny tsimatimanota. Amin'ny fanoratana lahatsoratra momba izany dia ny hamehezana ny hatezerako ho amin'ny zavatra tsara no ao anatin'ny lohako, amin'ny fanelezana ny zava-misy mba hananan'ny olona maro ny torohayilainy handraisany fanapahan-kevitra ho amin'ny tombontsoany.
GV: Mahazo tamberina amin'ny lahatsoratra nosoratanao ve ianao ?
LS: Avy amin'ny mpiara-miasa ato amin'ny GV, ny namana ary ny fianakaviana izay mamaky azy ireny ny ankamaroany. Amin'ny ankapobeny dia heveriko fa mahafaly azy ireo ny fomba fanoratro, fa ambonin'ny zavatra rehetra dia ankasitrahan'izay ireo ny ezaka ataoko amin'ny lahatsoratra ka mahatonga izany hahafinaritra sy maha-te hamaky. Maka ny toeran'ny mpamaky aho rehefa manoratra, tsapako amin'io fomba io fa manomboka mahafinaritra sy mahaliana ny lahatsoratra. Ary nanomboka tamin'ny nandanian-dry zareo fotoana hamakiana izay nosoratako dia ny tsy hahasorena azy ireo fara-fahakeliny azoko atao.
GV: Inona no fanamby lehibe indrindra ho anao amin'ny maha-mpandika teny anao ?
LS: Niasa an-tsitrapo mandrakariva aho, ary amin'ny ankapobeny dia tena nanam-paharetana ny ankamaroan'ireo olona niara-niasa tamiko sady nampianatra ahy zavatra maro izy ireo. Nampianarin'ilay ‘webmaster’-ko voalohany html aho mba hahafahako mandika avy hatrany pejinà tranonkala, amin'ny fikarohana ny lahatsoratra any anatin'ireo tsatòka samihafa any. Angamba ilay andraikitro voalohany no asa lehibe sady henjikenjika indrindra nataoko, nandefasan-dreo lahatsoratra lava be mba hadika ao anatin'ny fotoana fohy aho , efatra na dimy andro no fotoana nananako hamitàna sy hanamarinana izany. Tsy ampy torimaso aho nefa mahafinaritra ahy isa-minitra izany. Ho an'ny Community Empowerment Collective no tetikasa lehibe indrindra nataoko izay niarahako niasa nandritra ny taona maro toy ny mpandika teny, mpandrindra, mpanome endrika tranonkala, ary mbola miara-miasa amin-dry zareo aho rehefa ilainy. Tsy hoe fotsiny nandika pejy 400 amin'ny fiteny Espaniola aho, fa izaho ihany koa no nanome ilay endrika vaovao sy namadika pejy maherin'ny 4.000 ho amin'io endrika vaovao io amin'ny fiteny 30 samihafa.
GV: Ahoana ny fijerinao ireo mpandika teny miasa tena ao amin'ny firaisam-be Eoropeana amin'izao fotoana izao ?
LS: Azoko lazaina fa tena mahantra. Tsy mbola mety mihitsy, ary miaraka amin'ny krizy vao mainka miha-ratsy. Ohatra, orinasa maro no mampiasa ny fandikanteny elektronika mba handikana ny fomba fampiasana ny vokatra vokariny ho amin'ny fiteny hafa, na dia tsy mazava sy mikorontana aza izany. Noho izay fomba izay dia mihena tsikelikely ny saha iasan'ny mpandika teny miasa tena. Ny ankamaroan'ny mpandika teny fantatro dia miasa ho anà andrim-panjakana Eoropeana, angamba mety mandreraka izany nefa azo antoka.
Lourdes miaraka amin'ny mpanoratra Juan Arellano any Bruxelles. Sary nahazoana alàlana.
GV: Inona no tianao ho lazaina amin'ireo manomboka mirotsaka ao anatin'ny tontolon'ny fandikàna teny ?
LS: Tena tsotra : vakio ny fanikàn-teny nataonao. Araka ny hevitro tsotra, misy lalàna fototra iray mba hampahomby ny fandikàn-teny : tsy tokony ho fantatry ny mpamaky fa teny nadika io. Amin'ny lafiny iray, manàna faharetana, tsy maninona na dia misy tsy mety aza, fa na ho ela na ho haingana hisy fihatsarana izany. Fanampin'izany, tahaka ny nataon'ireo matihanina sasany tany aloha tany, ny mpandika teny dia tokony hiady amin'ny fitsofohan'ireo tsy matihanina sy hanomboka hangataka fiarovana ho an'ny sahan'asany amin'ny fidiran'ny olona tsy natao ho amin'izany, ary ambonin'izany rehetra izany, amin'ny milina. Raha izany no tontosa dia tsy misy ny mizàna tsindrian'ila
GV: Raha niankina taminao, inona no tianao ovaina na amafisina ato amin'ny Global Voices?
LS: Ny marina dia tiako amin'izao izy izao izy, indrindra amin'izao endriny vaovao izao. Amin'ity tranga ity dia heveriko fa tsara ny mampihatra ny lalàna fototra : raha ohatra ka tsy maninona dia aza kitihana.
GV: Lazao anay ny maha-ianao anao, na izay tsapanao fa mampisongadina anao.
LS: Raha misy zavatra tena haiko dia ny mikarokaroka amin'ny tranonkala, mikaroka zavatra ao amin'ny aterineto, na vaovao izany, na fampiharana, na rindrankajy na zavatra amidy… Tsy fantatro na noho ny faharetako izany, na fiheverana na hamafisan-doha tsotra izao, fa an-kavitsiana foana ny hoe tsy mahita izay tadiaviko aho. Izany no hanadrohadroan'ny namako ahy hoe “IAskLourdes.com.” (anontaniakoiLourdes.com)
Zavatra hafa ihany koa, taona vitsivitsy lasa izay, i Phil Bartle, mpanoratra ny CEC sy i John Petroff mpitantana ny PEOI izay niara-niasa tamiko nandritra ny taona maro no nanolotra ahy ho isan'ny handray anjara amin'ny lokan'ny Firenena Mikambanany ho an'ny ” mpirotsaka an-tsitrapon'ny Taona”, omena ireo mpanolo-tena amin'ny aterineto. Tena nahafaly ahy io loka io, tsy noho ny nankasitrahan'izy roa tonta ireo fotsiny ny asako fa nanamafy ihany koa izany fa nampiroborobo ny fananako namana mahafinaritra aho nandritra io diako io.
Misaotra anao ry Lourdes! Azo vakiana eto ny fandikàn-teniny sy ireo lahatsoratra nosoratany, ary araho ao amin'ny Twitter @LulesSada ny izy.